In aan ogaano taariikhda iyo dhaqanka bqoqrtooyadii Itobiya iyo siyaabihii ay u soo dhexgaleen shacuubta markii dambena ay ku gumaysteen waxay aad u sahlaysaa in la fahmo xeesha gumaysiga. Adeegyada ay u fulinayaan Cabdi Iley iyo Ibraahim dheere gumaysiga Itobiya ma’aha arin ku cusub Itobiya iyo qawmiyadihii ay baabi’yeen dhaqan iyo diin ahaanba.
Sheekadan taariikhiga ah wuxuu qoraaga diiradda ku saarayaa magaalada Adisa ababa waxaya ahaan jirtay iyo siyaabihii uu boqor Miniliq ku qabsaday. Shaki kuma jiro inuu Minilq ahaa nin khiyaana badan oo fidiyay boqortooyadiisii. Waxaan aad ula yaabay markii sirdoonkiisa ay u sheegeen inay Somalida iyagoo aamusan bixiyeen canshuurtii dulsaarka ahayd fariintuu siiyay;
“Arrinkan waa halis cusub. Haddii Soomaalidu ay sidaan u aamusto waa astaan dhibaato oo boqortooyadeyda ku soo fool leh. Goorta Soomaalidu ay caradooda muujinayaan, arrimahooda waa la sabaaleyn og yahay. Mana aha in la gaarsiiyo heer ay furka tuuraan, heer ay ka dhiidhiyaan gumeysiga, heer ay dagaallamaan.”
Maqaalkan sheekada iyo taariikhda isugu dhafan Halkan Ka Akhri.